भट्टको बलात्कारी र हत्यारालाई कार्वाही गर्न कोइरालाको माग - नेपालबहस
भट्टको बलात्कारी र हत्यारालाई कार्वाही गर्न कोइरालाको माग
| १७:४९:२७ मा प्रकाशित
२५ माघ, काठमाडौं । सरकारको दर्बिलो उपस्थिति नहुँदा नेपालमा अहिले पनि किशोरी बलात्कार र हत्याका घटनाहरुमा कमी आउन सकिरहेको छैन् । निर्मला पन्तदेखि भागरथी भट्टसम्मका घटनाहरु सबै सुदूर पश्चिमका कलंकहरु हुन् ।
सुदूरपश्चिममा वर्तमानमा देखिएका एकपछि अर्को बलात्कार र हत्याका घटिरहेका घटनाहरु र यस्ता जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक घटनाहरुमा वर्तमान सरकार कार्वाही गर्न डराई रहेको छ ? आफैमा आश्चर्य लागिरहेको छ । सिंगो प्रहरी प्रशासन किन अपराधीहरुलाई समातेर कानूनी कार्वाहीको कठघरामा उभ्याउन सकिरहेको छैन ? प्रशासन किन मौन बस्न बाध्य छ या पारिएको छ ? यो एउटा गम्भिर प्रकारको बिषय बनिरहेको देखिन्छ ।
सिंगो मुलुक हल्लाउने यस्ता खालका आपराधिक कृयाकलापमा वर्तमान सरकार कुनै पनि कार्वाही गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको कुरा बिगतमा निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या हुँदाको कहालीलाग्दो यथार्थता ज्यूँदै छ । फेरि अहिले बैतडी जिल्लाको चढेपानीमा भएको भागरथी भट्टको बलात्कार पछिको हत्याले मुलुकमा सरकार र प्रशासन नभएको झल्को दिएको छ । हत्यारा पत्ता लगाउन र कानूनी कार्वाही गर्न सरकारलाई केले छेकिरहेको छ ? आफैमा आश्चर्य लाग्दो बिषय बनिरहेको छ ।
यसै क्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालाले बैतडी, चढेपानी कि भागरथी भट्टको बलात्कारपछि भएको हत्याको घटनामा संलग्न अपराधीलाई तत्काल पक्राउ गरी कार्वाही गर्न सरकारसँग जोडदार रुपमा माग गरेका छन् । विगतमा निर्मला पन्तको हत्यारा र बलात्कारीले पाएको जस्तो उन्मुक्ति भट्टको अपराधीले नपाओस भन्दै सरकारलाई भट्टको बलात्कारी र हत्यारालाई तत्काल कार्वाही गर्दै नेता डा. कोइरालाले ट्विटरमार्फत लेखेका छन्, “बैतडी दोगडाकेदार वार्ड नं. ७ निवासी १७ बर्षिय भागरथी भट्टको विद्यालयबाट घर फर्कदै गर्दा बलात्कार र हत्याको खबरले मर्माहित भएको छु । उक्त घटनाका दोषीलाई कारवाही गर्न सरकारसँग माग गर्दछु । विगतमा निर्मला पन्त घटनाको जस्तो यसको दोषीले उन्मूक्ति नपाओस् ।”
भागरथी हत्या प्रकरणः आरोपितको चौथोपटक म्याद थपियाे ३ दिन पहिले
भागरथीको परिवारलाई कोरियाबाट सहयोग हस्तान्तरण ५ दिन पहिले
बलात्कार आरोपमा १८ वर्ष कैद फैसला १ हप्ता पहिले
भागरथी भट्टको आजै महाकाली आर्यघाटमा अन्त्येष्टि २ हप्ता पहिले
डेढ वर्षदेखि अरुण तेस्रोले भुक्तानी नदिँदा मजदूर समस्यामा २ दिन पहिले
शिक्षकहरूको जिल्लान्तर सरूवा हुन मिल्ने बाटो खुल्याे ७ दिन पहिले
गाउँमा सडक पुगेपछि बाजागाजासहित खुशीयाली ५ दिन पहिले
फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल र सिमाना कायम ७ दिन पहिले
भक्तपुर नगरपालिकामा नक्शापास र सूचीकरणको प्रक्रिया शुरु ३ हप्ता पहिले
औधोगिक करिडोरप्रति स्थानीय असन्तुष्ट, शिलान्यासका लागी तयार मञ्‍च भत्काइयाे २ दिन पहिले
शनिबार कांग्रेसको महिला संघले विरोध प्रदर्शन गर्ने २ हप्ता पहिले
फेरि पनि बन्दाबन्दी गर्ने मन्त्रालयको योजना छैन ५ महिना पहिले
राखेप र कीर्तिपुर नगरपालिकाबीच सम्झौता ३ महिना पहिले
देशभर चिसो, पश्चिमी क्षेत्रमा सामान्य बदली १ वर्ष पहिले
चीनका दुवै नाका १० दिनसम्म बन्द ३ हप्ता पहिले